नारायणपुर यस क्षेत्रकै आर्थिक केन्द्रविन्दु बन्न सक्छ – Janaubhar
नारायणपुर यस क्षेत्रकै आर्थिक केन्द्रविन्दु बन्न सक्छ
प्रकाशित मितिः सोमवार, पुस २१, २०७१ | 156 Views ||
गोपाल प्रसाद लम्साल (अध्यक्ष) नारायणपुर उद्योग वाणिज्य संघ, दाङ
नारायणपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद लम्साल नारायणपुर केही वर्षभित्रै यस क्षेत्रकै आर्थिक केन्द्रविन्दु बन्ने बताउनुहुन्छ । भौगोलिक अवस्थाका कारण नारायणपुरमा सम्भावना निकै राम्रो भएको उहाँको भनाई छ । उद्योग वाणिज्य संघको गतिविधि, आगामी योजना, नारायणपुर क्षेत्रको सहरीकरणलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर लम्सालसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी । –सम्पादक
नारायणपुर उद्योग वाणिज्य संघले अहिले के गरिरहेको छ ?
नारायणपुर उद्योग वाणिज्य संघको भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट नयाँ कार्यसमिति आएको छ । अहिले हामीले नियमित कामहरु गरिरहेका छौं । हामीले अहिले संस्थागत सुधारको काम थालेका छौं । चाडपर्व नजिकिएकाले उपभोक्ताहरुलाई कसरी सर्वसुलभ तरिकाले वस्तु उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ विशेष गरेर व्यापारी व्यवसायीहरुको संस्था भएकाले यहाँको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ध्यान दिनेछ । साथै यहाँको समग्र सामाजिक काममा सहभागी हुनु उवासंघको दायित्व हो । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा यस क्षेत्रको विकासका लागि उवासंघको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रा गतिविधि त्यतातर्फ केन्द्रित हुनेछन् ।
तपाईंहरुको पहिलो प्राथमिकता के हो ?
आवश्यकताहरु असीमित हुन्छन् । नारायणपुर क्षेत्रका पनि थुप्रै आवश्यकता छन् । ती आवश्यकताहरु हामीले एकैपटक पूरा गर्न सक्दैनौं । हामीले आवश्यकताहरुको प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्ने हो । नारायणपुर क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा आवश्यकताको रुपमा बसपार्क देखिएको छ । नारायणपुरको सहरीकरण तीव्ररुपमा भए पनि बसपार्क नहुँदा समस्या परेको छ । अहिले घोराही र तुलसीपुरबाट नारायणपुर भएर गुड्ने गाडीहरु यहाँ धेरै बेर रहन सक्दैनन् । ग्रामीण क्षेत्रबाट आउने बासिन्दाहरुसमेत सिधै घोराही जान्छन् । यसले गर्दा नारायणपुर क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय अपेक्षाकृत रुपमा फष्टाउन सकेको छैन । अब हामीले कुनै क्षेत्रको जग्गा लिजमा लिएर भए पनि बसपार्क सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौं । यसले यहाँका व्यापारीहरुलाई मात्र नभएर समग्र नारायणपुरबासीलाई फाइदा हुन्छ । अन्य क्षेत्रबाट नारायणपुर आउनेहरुलाई पनि सजिलो हुनेछ । व्यवस्थित बसपार्क भएमा सहरको सौन्दर्य नै फेरिन्छ । जथाभाबी पार्किङको समस्या अन्त्य हुन्छ ।
त्यसैगरी फोहोर व्यवस्थापन हाम्रो अर्को प्राथमिकताको विषय हो । फोहोर व्यवस्थापनका लागि हामीले उचित पहल थाल्नेछौं । सडक बिस्तार पनि हाम्रो अर्को प्राथमिकता हो । नारायणपुरमा अहिले बस्ती विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ । गल्ली–गल्लीमा भवनहरु बनिरहेका छन् । तत्काल सडक बिस्तार गर्ने हो भने यसले भविष्यमा ठूलै समस्या सृजना गर्नेछ ।
नारायणपुर क्षेत्रका विकासका सम्भावनाहरु के हुन् ?
नारायणपुर सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो । केही वर्षभित्र नारायणपुर एउटा व्यवस्थित र ठूलो सहर बन्ने निश्चित छ । यहाँको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा पनि सहरीकरणका लागि प्रशस्त जग्गा छ । अहिले नारायणपुरमा क्षेत्रीय विमानस्थलका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । यहाँ क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउन सकिएको खण्डमा यहाँको व्यापार व्यवसाय र होटल व्यवसाय निकै फष्टाउनेछ । होलेरी–नारायणपुर–रिहार सडक सञ्चालनमा आएपछि हाम्रो सम्बन्ध सिधै भारतीय व्यापारसँग जोडिनेछ । अहिले सहिद मार्ग हुँदै होलेरी चीनसम्म सडक सञ्जाल जोड्न विभिन्न तह र तप्काबाट प्रस्ताव आइरहेको छ । यो प्रस्ताव सफल हुन सकेको खण्डमा नारायणपुर चीन र भारतको ट्राञ्जिट प्वाइन्ट बन्न सक्छ । यसले नारायणपुरको मात्र नभएर समग्र मुलुककै विकास गर्नेछ ।
नारायणपुर, ढिकपुर र हापुर समेट्ने गरी त्रिपुर नगरपालिकाको प्रस्ताव गरिएको छ । यहाँ नगरपालिका भएको खण्डमा हाम्रो हैसियतसमेत धेरै माथि उठ्नेछ । अहिले हामी दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको शाखाको रुपमा रहेका छौं । तर, नगरपालिका भइसकेपछि हामी सिधै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग जोडिन सक्नेछौं । यसले गर्दा यस क्षेत्रका एजेण्डालाई राष्ट्रियकरण गर्न सजिलो हुनेछ । हाम्रो उद्योग वाणिज्य संघको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित हुन सक्छ ।
म नारायणपुरको सम्भावना निकै देख्छु । केही वर्षभित्रै नारायणपुर यस क्षेत्रकै आर्थिक केन्द्रविन्दु बन्नेछ । तर सम्भावना देखेर मात्र हुँदैन । त्यसका लागि काम पनि गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको तर्फबाट उद्योग वाणिज्य संघले काम गरिरहेको छ । अब राज्यले पनि यस क्षेत्रको विकासका लागि ध्यान दिनुपर्छ । यहाँको पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ढल निकास, सडकलगायतका आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले विशेष योजना बनाउनुपर्छ ।
यहाँको सहरीकरण कसरी भइरहेको छ ?
पछिल्लो १० वर्षमा नारायणपुरको सहरीकरण तीव्र गतिमा भइरहेको छ । घोराही–तुलसीपुर सडकखण्डको बीचमा पर्ने भएकाले पनि नारायणपुरको महत्व अझ बढेको छ । कालान्तरमा घोराहीदेखि तुलसीपुरसम्म एउटै सहर हुने निश्चित छ । अहिले नारायणपुरका भित्री भागहरुमा पनि बस्ती विकास भइरहेको छ । गाउँ–गाउँबाट बसाइसराइ गरेर आउनेहरुको संख्या बढिरहेको छ । दाङको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नारायणपुरमा सबैभन्दा बढी सहरीकरण भएको छ भन्न सकिन्छ । तर, सहरीकरणसँगै यहाँका चुनौतीहरु पनि थपिएका छन् । सहर भनेको बस्ती विकास हुनुमात्र होइन । सहर हुनको लागि निश्चित आवश्यकता पूर्ति भएको हुनुपर्छ । सहरबासीहरुले न्यूनतम सुविधा पाएकै हुनुपर्छ । तर, अहिले नारायणपुरबासीले न्यूनतम सुविधा पनि पाएका छैनन् । अब सरकारले सहरबासीलाई आवश्यक पर्ने सुविधा नारायणपुरमा पनि उपलब्ध बनाउनुपर्छ ।
नारायणपुर उवासंघको निर्वाचनमा दुई प्यानल थियो । तपाईंहरुको प्यानलले जित्यो । पराजित प्यानललाई कसरी समेट्नुहुन्छ ?
निर्वाचन एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति हो । यसलाई हामीले अन्यथा मान्नुहुँदैन । तपाईंले भने जसरी अर्को प्यानल पराजित भएको पनि होइन । यहाँ कोही विजय वा कोही पराजित भएको छैन । सबैको जित भएको छ । निर्वाचन भइसकेपछि एउटाले जित्छ र अर्कोले हार्छ । यसलाई हामीले धेरै ध्यान दिनुहुँदैन । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि हामी सबैको साझा भएका छौं । यहाँका सबै व्यवसायीहरुसँग उचित समन्वय गरेर हामी अघि बढ्नेछौं । अर्को प्यानलमा रहनुभएका साथीहरुसँग पनि थुप्रै राम्रा एजेण्डाहरु छन् । उहाँहरुसँग हामी अहिले पनि नियमित सम्पर्कमा छौं । उहाँहरुको रायसुझावअनुसार नै हामी अघि बढ्ने हो । यसमा निर्वाचनको तुस पाल्नुको कुनै अर्थ छैन । हामी सबैको विचार र भावनालाई उचित सम्मान गर्छौं ।
यहाँको समग्र विकासमा उद्योग वाणिज्य संघ र अरु सबैको उत्तिकै भूमिका र जिम्मेवारी छ । यसमा हामीलाई शंका नगरे हुन्छ । हामी एकलौटीरुपमा अघि बढ्ने भन्ने कुरै हुँदैन । यस्ता सामाजिक संस्थामा सबैको विचार प्रतिनिधित्व हुन्छ । हामीहरु सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने छौं । यसमा सबैलाई विश्वस्त हुन म आग्रह गर्दछु ।
उवासंघमा गैरव्यवसायीहरुको वर्चश्व छ भनिन्छ नि ?
उद्योग वाणिज्य संघको सदस्यता लिनको लागि निश्चित विधि र प्रक्रिया छ । अहिलेका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरु यी विधि र प्रक्रियाअनुसार आउनुभएको हो । यसमा हामीले प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । हामीले प्रक्रिया पु¥याएर आउने सबैलाई सदस्यता दिनुपर्छ । यसमा हाम्रो विधानले नै स्पष्ट बोलेको छ । तर, तपाईंले भनेजस्तै उवासंघमा गैरव्यवसायीहरुलाई छिर्न नदिनको लागि हामीले विधान संशोधन गर्नुपर्छ । यसतर्फ सबैको सहयोग भयो भने हामी पनि सफल हुनेछौं ।
नारायणपुरमा उद्यमीभन्दा व्यापारी धेरै छन् । उद्यम विकास लागि तपाईंहरुले केही सोच्नुभएको छैन ?
नारायणपुरमा मात्र होइन समग्र देशभरि नै उद्यमीभन्दा व्यापारीको संख्या धेरै छ । उद्यम विकासका लागि सरकारले ठोस पहल थाल्नुपर्छ । नारायणपुर उवासंघले निजी क्षेत्रको तर्फबाट निश्चय नै केही पहल थाल्नेछ र थालि पनि रहेको छ । अब सरकारले पनि उद्यम विकासका लागि नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउन जरुरी छ ।
अन्त्यमा केही थप थियो कि ?
सबैभन्दा पहिले त तपाईं र तपाईंको पत्रिकालाई मेरो तथा समग्र उवासंघको विचार राख्ने अबसर प्रदान गर्नुभएको हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । साथै आम व्यवसायीहरुलाई नजिकिएको दशैं, तिहार र छठ पर्वको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । चाडपर्वमा उपभोक्ताहरुलाई सहजरुपमा सेवा उपलब्ध गराउन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्दछु ।
Prevयातायात क्षेत्रलाई राज्यले उपेक्षा गरेको छ
Next‘विप्रेषण विकास’को अवधारणा